Habka Dhaleecaynta Ama Cambaaraynta Saxan. Qalinkii: Eng Maxbuub - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Habka Dhaleecaynta Ama Cambaaraynta Saxan. Qalinkii: Eng Maxbuub
Habka Dhaleecaynta Ama Cambaaraynta Saxan. Qalinkii: Eng Maxbuub
Waan idin salaamay dhamaantiinba akhristow meelkasta aad joogtaanba. Inta aan maqaalkan bilaabin Kahor waxaan jeclaan lahaa in aan inyar idiinka iftiimiyo waxa igu kalifay in aan ka faaloodo arintan Kor Ku xusan taas oo ay sabab u tahay, markii aan arkay in bulsha waynta somaliyeed, Gaar ahan dhalinyaradda ama qofkasta oo Bini Aadam ah La Dhaleeceeyo oo la Cambaareeyo Ama Uu Wax Dhaleeceeyo oo uu Cambaareeyo Isagu, haboontahayna in loo dhigo dhaleeceenta curinteeda iyo xalinteedaba Mid Xirfadaysan oo Aqoonaysan oo aan ahyn iskala soo bood uu.
Sidaas darted waxaan jecleestay in aad ila wadaagtaan Qormadan kooban ee aan ka Qoray Arimaha kobcinta iyo dhisida nolol hagaagsan oo aan wax qodax ah lahayn. xxxxxxxx Qodobadiina waa Sidan:
Marka hore ee shakhsi ku dhaleeceeyo ama ku cambareeyo, noqo mid dhagaysta akhriya u dhaga furnaada dadka wax dhaleceynaya, adigoon eegayn qaabka iyo Asluubta ay kugu soo gudbinayaan dhaleeceentoodaas. midna ogsoonow Akhristow in dhaleeceentu ama cambaarayntu sideedaba aanay ahayn Arin Fudud, Maxaa yeelay waxaad la kulmaysaa dhaleeceeyayaal ama cambaareeyayaal aan garanayn qaabka wax loo dhaleeceeyo ee loo cambaareeyo ee xirfadaysan. Ka Fogow fal celinta caadifadaysan eek u waajahan dhaleeceenta iyo fikirada dadka kale ee lagu soo jeedinayo,
Baadh fikradaha iyo dhaleeceenta dhaw ee cad, lana xalinkaro isla markaaba, Tusaale ahaan hadii Mid ku dhaleeceenaya ku dhaho “Waa Inaad iska hagaajisaa Hadalka”. Waa dhaleeceen badheedh ah balse aan cadayn, markaas waxaa laggaga baahanyahay inaad waydisid inuu dhaleeceentiisa Xaddido “ma dhanka hordhacaa mise waa gebogabada iyo Isku xidhka hadlakayga.” Mar marka qaar waxaad la kulmi doontaa fikiro iyo dhaleeceen is burinaysa lkn adiga mida kula gudboon ayaa ah inaad aqabshid oo soo dhawaysid. Tusaale ahaan waxaad La Kulmi kartaa Ashkhaas ku leh “Qaabki aad bulshada u eegaysay markaad Hadlaysay way fiicnayd.” Iyo mid ku dhaha “Qaabkii aad bulshada u eegaysay markii aad khudbadaynaysay way xumeed.” Halkaa waxaa laggugu soo gudbiyey Xaqqiiqooyin jira. Saa owgeed waxaa dhici karta in bilowggii hadlakaaga aad daka si wacan u eegaysay Balse gabagabadii aadan si wacan u eegayn. Saa Owgeed waxaa kula gudboon in aad waydiisid labada qof ee ku dhaleeceenaya Asbaabta iyo waxyaabaha ay ku xukmiyeen dhaleeceentooda iyo cambaarayntooda.
Qiimee dhaleeceenta lagguu soo jeedinayo oo fahan, maxaa yeelay waa muhiim in aad fahantid dhaleeceen kasta oo lagu soo jeedinayo, kadib u adeegso xirfadaada xallineed adiggoo dhaleeceeyaha ama cambaareeyaha si dibicsan ula hadlaya.
Gabagabadii dejiso qorshe aad ku xalinaysid dhaleeceenahaas lagu soo jeedinayo, kadib qor points ka dhaleeceentaasi ka duulayso xalkeedana u fadhiiso, hana noqon qof ay dhibayso ama xasaasiyad ka qaba dhaleeceemaha kulul ee qadhaadh, ee noqo qof ku cibro qaata oo cashar ka barta. Waa hubaal inaad la kulmaysid dhaleeceeno kala gaddisan oo kala durugsan kala xanuun badan, lkn Ha Ka tagin ixtiraamka iyo dhagaysiga qofka hadba ku dhaleeceenaya ee ku cambaaraynaya.